कोरोनाको डेल्टा भेरियन्ट कति देशमा फैलियो? - Deshko News Deshko News कोरोनाको डेल्टा भेरियन्ट कति देशमा फैलियो? - Deshko News
कोरोनाको डेल्टा भेरियन्ट कति देशमा फैलियो?
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले कोरोनाको डेल्टा भेरियन्ट तीव्र गतिमा फैलिरहेकोे भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यही अनुपातमा डेल्टा भेरियन्ट फैलिरहे विश्वमै संक्रमण बढ्ने खतरा भएको डब्लूएचओले जनाएको छ ।
डब्लूएचओले कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलाउने अल्फा, बिटा, गामा र डेल्टा भेरियन्टको निगरानी गर्न थालेको जनाएको छ । डेल्टा, अल्फा भेरियन्ट भन्दा तीव्र गतिमा फैलने गरेको पाइएको छ । डेल्टा भेरियन्ट भारत, नेपाल लगायत देशमा भेटिएको छ ।